Taariikhda Xafiiska Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay u Qaabilsan Soomaaliya - iftineducation.com
The real Somali Map (Mapka saxda ah ee Soomaaliya)
iftineducation.com – Xafiiska Ergeyga Khaaska ah ee Qarammada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo hadda xaruntiisu tahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaa madax xilligan ka ah Axmed Walad Cabdalla. Haddaba waxaan si kooban u guud maraynaa taariikh ahaan sidii uu ku bilowday iyo ciddii xilalka ka soo qabatay iyo shaqada xafiiskaas.
Xoghayahii Guud ee Qarammada Midoobay (January 1, 1982 � January 1, 1992)Javier P�rez de Cu�llar, oo u dhashay dalka Peru, ayaa Decmber 1991 waxa uu Soomaaliya u diray wafti xaqiiqo raadis ah si ay u soo ogaadaan xaaladda dhabta ah ee ka jirtay Soomaaliya. Waftigaas waxaa hoggaaminayey James O.C. Jonah, oo u dhashay dalka Sierra Leone. Waftigaasi waxay soo diyaariyeen warbixin ay aad uga dayriyeen xaaladda Soomaaliya. Warbixintaas ayaa la tilmaamaa in ay sabab u ahayd in Qarammada Midoobay ay Ergey ama wakiil gaar ah u magacawdo Soomaaliya.
Xoghayahii Guud ee Qarammada Midoobay (1 January 1992 � 1 January 1997)Boutros Boutros-Ghali, oo u dhashay dalka Masar, ayaa April 28, 1992 waxa uu Wakiilkiisa Gaarka ah ee Soomaaliya u magacaabay Maxamed Sahnoun, oo u dhashay dalka Algeria. Waa xilligii UNOSOM I (April 1992 – March 1993). Laakiin October 26, 1992 ayaa Sahnoun iska casilay xilkaas kaddib, sida la sheegay, markiikhilaaf soo kala dhex-galay isaga xoghayaha guud QM.
Markaas ayaa waxaa Xoghayaha Guud ee QM waxa uu November 8, 1992 Ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u magacaabay Ismat T. Kittani oo reer Ciraaq ah. Ismat Kittani waxa uu ahaa ergeyga gaarka ilaa March 1993 markaas oo ay bilaabatayUNOSOM II (March 1993 – March 1995) iyo xilligii hawlgalkii UNITAF ee “raja soo celinta Soomaaliya” (December 5, 1992 ilaa May 4, 1993).
Xoghaha Guud ee QM (ee xilka qabtay January 1, 2007) Ban Ki-moon, oo u dhashay dalka South Korean, ayaa Ergeygiisa Gaarka ah ee Soomaaliya waxa uu September 12, 2007 u magacaabay Axmed Walad Cabdalla (Ahmedou Ould-Abdallah) oo u dhashay dalka Mauritania, oo xilkaas hadda haya, isagoo ah madaxa xafiiska UNPOS. Walad Cabdalla waxa uu qayb weyn ka qaatay heshiiskii Is-afgadad ee dhexmaray Kenya iyo Soomaaliya ee ku saabsanaa badda Soomaalia. (Sida ku cad warbixinta hordhaca ah ee ka kooban 15-ka bog ee Dawladda Federaalka kumeelgaarka ah ay u gudbisatey April 14, 2009, taas oo qayb ka ah xogta lagu lifaaqay heshiiskii Is-afgarad ee xuduudaha badda ee April 7, 2009 magaalada Nairobi ku dhexmaray xukuumadda FKMG iyo Kenya, waaxaa diyaarinta (warbixintaas) ka qayb qaaday Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya. (Eeg Bogga UN). June 3, 2010 ayaa Walad Cabdalla waxa uu sheegay in uu xilka iska casilayo bisha July 2010.
Xoghaha Guud ee QM Ban Ki-moon ayaa June 9, 2010 waxa uu xilka wakiilka UN ee Soomaaliya u magacaabay Augustine P. Mahiga oo u dhashay dalka Tanzania, waxana uu July 1, 2010 xilka kala wareegay Walad Cabdalla.